Iimpawu, ukondla kunye nokuzala kwakhona kwe-blue lobster | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha malunga ilobster eluhlaza okwesibhakabhaka. Yinto eqokelelweyo ye-crustacean yosapho lakwaParastacidae. Igama layo lenzululwazi ngu I-Cherax cainii. Kuyaziwa kakhulu kwihlabathi lee-crustaceans, ke siza kuyinikela yonke iposti kuyo.
Apha uya kuba nakho ukwazi iimpawu, ukondla, ukuvelisa kwakhona kunye nolunye ulwazi malunga ne-blue lobster.
3 Ukuziphatha kwe-lobster eluhlaza okwesibhakabhaka
5 Ukuzaliswa kweekreyifishi eziluhlaza okwesibhakabhaka
Umzimba we-lobster eluhlaza wahlulwe kabini. Kwelinye icala, isisu yindawo apho umsila ukhona kwaye, kwelinye icala, i-cephalothorax, apho isifuba kunye nentloko khona. Igqunywe ngeqokobhe elinika ukhuseleko kumalungu angaphakathi. Ubuso bakhe buphela bujolise. Sinokuqaqambisa kwintloko yakhe amehlo, anomilo obalaseleyo. Umbono wakhe, ngaphandle kokuvela emehlweni akhe, ulihlwempu kakhulu. Ngesi sizathu, kuya kufuneka usebenzise ixesha elide ngaphambi kokuba ube nakho ukuziva umphezulu kwaye wazi ukuba zeziphi iindawo onokuhamba ngokuchanekileyo kuzo.
Ngokubhekiselele kwiimpondo, incam yabo ibukhali ngokupheleleyo kwaye ibukhali. Ikwanayo neanténule ebuthathaka eyisebenzisayo ukuthintela kunye nokungcamla. Ngokusebenzisa ezi ndlela zoluvo unokufumana ukutya kwaye wazi iindawo anokuhamba kuzo kakuhle. Bayakwazi ukuxabisa amanzi akumgangatho ngokulinganisa ubushushu, ityuwa kunye ne-pH phakathi kwezinye izinto.
Icandelo elingezantsi lekreyifishi limile ngokuba linemilenze emihlanu. Ezi zimbini zokuqala zezo zine-tweezers okanye chelas. Uhlala esebenzisa zona ukuzikhusela nokuhlasela. Imilenze yesibini neyesithathu yimilenze emincinci eyisebenzisayo ukuphatha ukutya. Iibini ezimbini zokugqibela zemilenze zincinci kwaye zinokuthathwa njengeziqhelekileyo. Usebenzisa ukuba babe nenkxaso engcono kwaye bakwazi ukuhamba ngokulula.
Ngokubhekisele kwisisu sayo, ibizwa ngokuba yi-pleon kwaye yahlulwe yangamacandelo aliqela ahambayo. Kwicandelo ngalinye linamaphiko amancinci aphela kwicandelo elincinci kakhulu le-laminar. Esi siqwenga sibizwa ngokuba yitelson. Inayo i-pleopods eyisebenzisela ukuqubha kwindawo yayo yangaphakathi.
Zihlala zinobukhulu obukhulu, ifikelela kuma-25 cm ubude. I-lobster eluhlaza ngokomndilili inobunzima obumalunga nama-500 g Oku kuyenza ibe yenye yezona ntlanzi zinkulu zasemanzini ezinamanzi amatsha. Phantse iipesenti ezingama-25 zobunzima bayo bomzimba busemsileni, ukuyenza ukuba ibe lilungu lomzimba onomdla kakhulu kwezokupheka. Inyama yayo inexabiso elikhulu kwaye iyasonwabela kwiziyolo ezintle zekreyifishi.
Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zeekreyifishi, lo mzekelo unomzimba oluhlaza okwesibhakabhaka kwaye uyahluka phakathi kweethoni ezikhanyayo, ezimdaka, ezingwevu, mthubi nobomvu. Kuxhomekeka kwindidi oyinyangayo, kunokubakho isikimu sombala. Kunye nomzimba wayo inokubonisa amachaphaza amancinci umbala omhlophe kunye notyheli.
Amadoda aneenzipho ezinamabala amabini abomvu njengenxalenye yeplon. Ezi mpawu zezi zenza ukuba kube lula ukwahlula phakathi kwamadoda nabasetyhini. Ubungakanani bombala buxhomekeke ngokupheleleyo kwisini somntu, ubudala kunye nempilo. Ubukhulu bayo bubukhulu, kuya kuba mnyama.
Ukuziphatha kwe-lobster eluhlaza okwesibhakabhaka
Indawo yendalo yale crustacean yimilambo. Imilambo efumaneka kuyo ithanda ukunciphisa ukuhamba kwayo ngamaxesha athile onyaka kangangokuba ide yome. Ukunciphisa le meko, ikreyifishi eluhlaza okwesibhakabhaka idibana namanye amaqabane ayo equleni lamanzi asekhona.
Ukuba ukoma komlambo kuwushiya kwindawo evulekileyo kwaye awunalo ixesha lokufikelela kwimithombo yamanzi ekhoyo, into eyenzayo kukumba umngxuma onzulu eludakeni ukuze uzingcwabe kwaye ulinde iimvula ezintsha ukuba zinabise umlambo. Xa iimvula ezintsha zisihla kwakhona, iikreyifishi zinokunyuka ziye phezulu. Iyakwazi ukuhlala unyaka omnye ngexesha lonyaka omnye.
Bathanda ukukhetha iindawo ezinamatye ezifumaneka embindini nakwindawo ezisezantsi zemilambo. Banokubonakala behlala kwimigxobhozo apho kukho amachibi anzulu kwaye enemingxunya yokuzimela phakathi kwamatye.
Enye yezona zinto zincinci ezinobundlobongela kwilizwe laselwandle. Zihlala ngokugqibeleleyo nezinye iintlanzi ezinobungakanani obulinganayo kuzo kwaye zinkulu ngakumbi. Nangona inoxolo, iyakwazi ukuzingela nokutshabalalisa oonokrwece bezinye izilwanyana ezicothayo ezinjengeenkumba. Isebenza kakhulu ebusuku. Ngexesha leentsuku bachitha ukuphumla bekhuselekile kwindawo yabo yokuhlala.
Ixesha eliqhelekileyo lokuphila lihlala unyaka omnye, nangona iisampulu ezinokuya kwiminyaka emi-3 zibonwe.
Masiqhubeke nokondla ilobster eluhlaza okwesibhakabhaka. Isekwe kwizinto zokubola zezityalo ezifumaneka emazantsi emilambo. Ungatya imifuno encinci kunye nentlanzi engaboliyo.
Xa usitya ukutya okonakeleyo utya ibacteria kunye nefungi enxulunyaniswa nayo kwaye zinomsoco kwaye zinomxholo ophezulu weprotheni. Inenkqubo yokwetyisa ekwaziyo ukwetyisa inyama kunye nemifuno. Yitya ukusuka kwimbewu yeziqhamo ukuya kwintlanzi encinci kwaye udlule.
Ukuzaliswa kweekreyifishi eziluhlaza okwesibhakabhaka
I-lobster eluhlaza okwesibhakabhaka ivelisa kwakhona ukuya kumaxesha ama-4 ngonyaka. Inempawu zokukhula ngokukhawuleza kwasekuqaleni kokuzalwa kwayo. Nje ukuba indoda kunye nabasetyhini bakope, eyokugqibela isebenzisa iinwele ezintle ezisemaphethelweni ezinto. Ngale nto unokubamba amaqanda ngelixa bekhula. Amaqanda abekwe kwicandelo lesithandathu lesisu apho kubonakala khona ifom yefeni.
Kwindlela nganye yokubeka iyakwazi ukugcina phakathi kwamaqanda angama-200 ukuya kwayi-1000, kuxhomekeke kubukhulu bomfazi. Eyona nto inkulu emfazini, kokukhona kufuneka abeke amaqanda amaninzi, nangona oku kuxhomekeke kubudala. Njengokuba usiba mdala, inani lamaqanda obeka kulo liyancipha.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-lobster eluhlaza kunye nendlela yayo yokuphila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Umbala oluhlaza